Herisetra nahafaty :: Trobaky ny antsy ny kibon'ilay zandary nanasaraka ady • AoRaha
Herisetra nahafaty Trobaky ny antsy ny kibon’ilay zandary nanasaraka ady
Niafara tamin’ny fahafatesany ny ratra mafy nahazo ny zandary mpianadraharaha iray, tany Mangatamboahangy Ambatofinandrahana, ny alin’ny alatsinainy lasa teo. Voatsindron’ny antsy ny kibony.
Nanasaraka lehilahy roa niady sy nifampikasi-tanana ity zandary no izao niharan-doza izao. Lehilahy iray no efa voatazona atao famotorana amin’ity raharaha ity.
Nahita lehilahy roa nifampitolona ilay zandary mpiana-draharaha iray miasa any Mangatamboahangy nandeha irery, afak’omaly, tokony ho tamin’ny fito ora hariva. Niditra an-tsehatra nanasaraka an’ireto olona ireto avy hatrany izy, saingy tamin’izany indrindra no namparatra azy. «Nanaiky niala moramora ny iray tamin’ izy roa lahy nifampitolona. Nisy antsy kosa tany amin’ilay faharoa. Tsy nihambahamba itsy farany nanindrona antsy ny kibon’ilay zandary. Nandositra izy, avy eo», araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny Zandarimaria, any Ambatofinandrahana.
Fanenjehana alina manontolo
Nijininika ny ra teo amin’ ny kibon’ilay zandary mpiana-draharaha. Tsy nahatsiaro tena izy. Nentina haingana teny amin’ny hopitaly. Ora iray sy sasany taorian’izay dia tapitra ny ainy. Naheno an’io tranga io ny zandary namany tany amin’ ny birao. Nokarohina, nandritra ny alina, ilay nanindrona antsy. Voasambotra izy ka noentina notazonina natao famotorana. Nalaina ambavany ihany koa ilay lehilahy niady taminy hahafantarana ny zava-nisy marina.
Nokarakaraina ny vatana mangatsiakan’ilay mpitandro filaminana izay mbola hoentina any Ambatofinandrahana. Fantatra fa fiara tsy mataho-dalana no hitondrana ny razana hamakivaky lalana an-jatony kilaometatra.
Halatra môtô sy bisikileta
Fanendahana :: Tra-tehaka ity vehivavy nandroba tovovavy